ချစ်ကြည်အေး: နှလုံးသား အာဟာရ ပြည့်ဝခဲ့သောနေ့-၃
P.Ti Mon Oct 11, 04:11:00 PM GMT+8
အမရေ... အမေရေးထားလိုက်တာ မှတ်တမ်းဖြစ်တာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အရေးပျင်းလို့ ဘာမှ မရေးပါ။ ဟောပြောပွဲတုန်းက ရောက်တာ နောက်ကျလို့ စာအုပ်ဝယ်လို့မရခဲ့လို့ နောက်နေ့မှာ Peninsula Plaza မှာသွားဝယ်ခဲ့ရတယ်။
လက်မှတ်ကိုတော့ ဒီလိုပဲ စီစဉ်တာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်အမ။ လက်မှတ်ပေါ် ခုံနံပါတ်ထည့်လိုက်ရင် အတူတူဝယ်မထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူထိုင်ရဖို့ ခက်သွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူနားထောင်ရတာ ပိုသဘောကျလို့ပါ။
နောက်ကျမှပဲ ရောက်လို့ မနှစ်ကတော့ ဒီနှစ်ပါ နောက်နားမှာ ထိုင်ရပေမယ့် ပြောတာတွေ အကုန်ကြားတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Anonymous Mon Oct 11, 04:43:00 PM GMT+8
ခုန မန့်ထားတာ မရဘူး ဟင့်.. မျှဝေခြင်း အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် နောက်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ လည်း နားထောင်ဘို့ မကြုံ့ဘူး
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Mon Oct 11, 06:32:00 PM GMT+8
Anonymous Mon Oct 11, 07:19:00 PM GMT+8
ဆရာ အော်ပီကျယ်ရဲ့ ကာတွန်းလေးတွေ ကကျွန်တော့် အသည်းစွဲပေါ့။
ညီမလေး Mon Oct 11, 09:26:00 PM GMT+8
မိုက်တယ် ဆရာ APK ရဲ့ တကွက် ကာတွန်းတွေက တကွက်ဆို ဆိုသလောက်လေ .. ညီမလေးကတော့ အရမ်းကြိုက်တယ် .. နောက်တခေါက် ကိုတာတို့၊ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံတို့ ကိုခေါ်ရင်ကောင်းမယ်နော် .. ။
ခုလိုပဲ ချစ်ချစ်တို့ ဂျစ်တူးတို့ ကျေးဇူးနဲ့ ပြန်ကြားနားရတော့ မသွားနိူင်ပေမဲ့လည်း ကျေနပ်မိတယ် ။ ကျေးဇူးကမ္ဘာနော် ..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Mon Oct 11, 09:42:00 PM GMT+8
ကာတွန်းလေးတွေ စဖတ်မိကထဲကအကုန်လုံးရင်ထဲ ကျန်နေတာမို့ နှစ်တွေကြာတောင် ခုထိမှတ်မိနေတုန်းပဲ...ဂျာနယ်လစ် တယောက်ကို ဗမာစစ်ပါကွယ် ဘေထုပ်တွေဝတ်နေရလိုံ ဒီပုံဖြစ်နေတာပါလို့ ပြောနေတဲ့ ရွာက ဘောင်းဘီတိုဝတ် အဖိုးကြီးနဲ့ ဂါဝန်ဝတ်ပြီးရေခပ်ဆင်းနေတဲ့ တောကဗမာမလေးပုံကို ဖတ်ရတုန်းကလဲ ဗမာ့စီးပွားရေးကို မချိပြုံးလေးပြုံးခဲ့ရဖူးတယ်
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) Mon Oct 11, 11:15:00 PM GMT+8
သိကြားမင်းလက်မတည့်တော့ဘူးထင်တယ်နော်။ သူလဲ အသံကြားရာ ယောင်ယမ်းပစ်ပုံရပါတယ်။ ကာတွန်းတွေ အားလုံးသဘောကျတယ်။ အမရဲ့ တင်ပြရှင်းလင်းချက်တွေကလဲ ကောင်းတယ်။ အခုလို မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော် အမ။
Heartmuseum Tue Oct 12, 10:27:00 AM GMT+8
Thx:)4ur sharing.
မိုးငွေ့...... Tue Oct 12, 03:29:00 PM GMT+8
လေးစားစရာချည်းပါပဲ အမချစ်တို့ကံကောင်းတယ် ဒီလိုဟောပြောပွဲမျိုးတက်ရတာ...ခုလို ဆရာအော်ပီကျယ် ဟောပြောခဲ့တာကို ကာတွန်းပုံလေးတွေနဲ့အတူ တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးကျူးကမ္ဘာဆိုင်ရော....။
စုချစ် Tue Oct 12, 04:47:00 PM GMT+8
ဆရာ့ကာတွန်းတွေကတော့ အသဲစွဲပဲ အမ...
Anonymous Tue Oct 12, 07:06:00 PM GMT+8
မြသွေးနီ Wed Oct 13, 04:15:00 PM GMT+8
ဖတ်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာ..။ကာတွန်းတွေကလည်း ထိမှထိ။
APK ကို စွဲစွဲမြဲမြဲဖတ်တယ်။ ဒီမှာ ဒါမျိုးတွေ မကြည့်ရတာကြာပီ..။ ;(
Anonymous Mon Mar 07, 01:56:00 PM GMT+8
dekorator wnetrz dekorator warszawa architekt wnetrz wystroj wnetrz pokoje
dekorator architekt wnetrz dekorator warszawa
wystroj wnetrz wystroj wnetrz sypialnia
[url=http://vader-wnetrza.pl]dekorator warszawa [/url]